Garsoorihii hogaaminayay fadhiyada dacwadii Madaxweynihii hore ee Ciraaq ayaa geeriyooday… – Hagaag.com
Garsoorihii hogaaminayay fadhiyada dacwadii Madaxweynihii hore ee Ciraaq ayaa geeriyooday…
Golaha Garsoorka Ciraaq ayaa Jimcihii wuxuu shaaciyey geerida Xaakim Maxamed Oreibi, oo hogaaminayey fadhiyada dacwadihii Madaxweynihii hore Saddam Hussein iyo tiirarka maamulkiisa intii u dhaxeysay 2004 iyo 2006.
Golaha Sare ee Garsoorka ayaa ku yiri – bayaan uu soo saaray – in Oreibi “uu ku dhintay da’da 52 jir oo uu ku dhacay cudurka Coronavirus.”
Waxay intaasi ku dareen in Oreibi “uu ahaa mid ka mid ah garsoorayaasha ugu caansan ee lahaa dhammaan sifooyinka wanaagsan ee garsooraha ku habboon, gaar ahaan geesinimadiisa inuu wajaho maxkamadeynta tiirarkii nidaamkii hore ee kaligii taliyihii, sidaa darteed wuxuu ku sii nagaan doonaa quluubta reer Ciraaq, guud ahaan iyo garsoorayaasha gaar ahaan. “
Dhiniciisa, Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kazemi wuxuu u tacsiyeeyay ehelada marxuumka, isagoo ku yiri – bayaan uu soo saaray – inuu “naftiisa u huray danta dalkiisa, sharciga aawadiis, iyo xaqiijinta cadaalada, u adeegida cadaalada iyo cadaalada dadka ciraaq kuwii jirdilay. “
Oreibi wuxuu ku dhashay 1969 caasimada Baqdaad, waxaana loo magacaabay inuu noqdo garsooraha baadhitaanka ee maxkamada sare ee ciraaq ee dacwadii madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein iyo maamulkiisii, bishii Ogosto 1, 2004.
Oreibi wuxuu gudoomiyay gudiga labaad ee Maxkamada Sare ee Ciqaabta Ciraaq bishii Sebtember 20, 2006, oo baaray kiisaska “Anfal, cabudhinta kacdoonkii shacabka, salaadii Jimcaha, duqeyntii Halabja, iyo baabi’inta xisbiyada diinta.”
5-tii November, 2006, waxay maxkamaddu soo saartay go’aankeedii ahaa in la deldelo Saddam Hussein iyo tiro ka mid ah kaaliyeyaashiisii, waxaana xukunkaas la riday 26-kii December ee isla sannadkaas, waxaana lagu fuliyay 30-kii isla bishaas, maalintaasi oo ku beegnayd Ciidul Adxaa ee barakaysan.
Go’aanka lagu fuliyay xukunka subaxa Ciidul Adxaa ayaa dhaliyay khilaaf wali ka socda Ciraaq iyo dunida Carabta, iyadoo dad badani u arkeen inay si toos ah u bahdileyso dareenka Muslimiinta ee sanad guurada diimeed ee farxada leheyd.